Te hahita vazah manambola ve ? | Tokinao
« Vohikala fitadiavan'olontiana | Main | Lalao : "aza ampijaliana ny tenintsika" »
ozy ny voanjo hoe aza atao anaty harona iray doly ny atodinao fa ndrao mianjera ka tsy manana tsony enao...
Mety hoe mijery ny options rehetra izy fa tsy tena hoe mifantoka be @ iny ee :)
Marina kosa aloha fa le mythe hoe andafy/vazah dia tonga lafatra mintsy no mahatonga ny ol hanao an'le izy e. Omena tsiny kosa ve izy ra mikatsaka izay mahasoa azy?
za manokana tsy mahita olana @ zany fa efa lehibe izy manao izany. Ra manotany hevitra moa izy dia azo atao tsara ny manome azy torolalana fa fiainany io ary izy no responsable @ zany...
Fa ra za aloha ela tsy miditra @ zany pataloha tery zany ah klelika e. Sao d maharatsy fihavanana be zany :)
Posted by: simp at 2008/03/27, 21:30
marina mihitsy izany ra-Simp a
Ka izay mihitsy ange ho'ahy ry simp e :-)!
Raha sanatria tsy hahomby ilay fanambadian-dry zareo dia izaho no homeny tsiny any aoriana any.
Raha vazaha manko dia "bobaka" be araka ny fiteny. Tafihindry zalahy tsaratsara any ny ankizivavintsika, ampiderainy euros sy dollar, analany azy mandritra ny fialantsasatra fotsiny hihihi dia avy eo "mbay tery" hoy izy lol
Fa dia anjaran'ny tsirairay no mieritreritra tokoa e! Milaza ny fijeriko, sy mba saro-piaro fotsiny aho ;-). Fa olon-dehibe daholo tokoa isika.
misaotra simp a
Posted by: tokinao at 2008/03/27, 21:41
misy dia mitady ny tena ho azensa matrimonialy fotsiny tsotra izao.
Za aza misy namako efa zokinjokiny ihany no nangataka tamiko ranjekaky o ! Efa lehibe hono ny zanany dia manirery izy.
Ny bandy moa dia mikôzy fa alefaso aty ny vazahavavy vonona hirevy fa hokarakarain'ny bandy - aie aie aie.
Tsy hay akory atao...
Posted by: ikalamako at 2008/03/27, 21:59
ikalamako > hihihi Fa mahita angah ikalamako raha vehivavy vonona hirevy fotsiny ? hihihi (vazivazy)
Ny leilahy ndray tsy de maasaro-piaro an-draToky 'ka. hihihi Amintsika manko dia manana ny hasina manokana mampiavaka azy ny vehivavy :-).
Posted by: Tokinao at 2008/03/27, 22:04
Mahagaga tokoa fa ny vehivavy no tena maro mitady vazaha an! Tsy dé tena hoe fahantrana lé izy fa fanabeazana sy toe-tsaina koa angamba ! misy amin'ireo Sipa fantatro mianatra @ lycée français (miala tsiny manonona anaran-tsekoly)sy Alliance française ! Raha mbola misy vazah na Karana mikôty an-dry zareo dé aleony miaraka @iny toy izay hiaraka @ lah zé gasy kely ery (lol)! Tena mahagaga !!!
Posted by: Chryss at 2008/03/28, 05:10
Tsy hoe mandiso ny hevitrareo aho akory ry zareo, na manamarina ny vehivavy malagasy te-hanambady vazaha (satria misy tokoa ny tsy mandinika vao miroboka ka tafiditra problèmes avy eo) fa jereo amin'ny fo tsy miangatra ange r'ireto ny toe-tsain'ny lehilahy malagasy e! Marina fa tsy ny rehetra tokoa, saingy tsy misy tandroka ny ratsy! Firifiry ny bevohoka tsy manambady, tsy asiana questions na "i" aza? Firifiry ny itsakitsahina sy ampirafesina fa mandefitra satria ho aiza intsony sy ny vavan'ny olona? Resaka fifandraisan'izy roa manokana fotsiny io. Ao atao hoe mivady ihany aza, firifiry no mamelona mitrongy ny vady aman-janany nefa voavono sy voadaroka lava izao? Firifiry no mitaiza irery ny zanany na eo aza ralehilahy vadiny? Firifiry ny lehilahy mikepoka irery ny vola miditra aminy nefa mbola mitaky fanajana sy fikarakarana satria loham-pianakaviana? Firifiry ny lehilahy milalao sentiments-n'olona fotsiny ka na efa miaraka 10 taona aza tsy mba mitsotra fa tsy hanambady anao anie izy? Tsy ho omby ity pejy ity raha hotanisaina eto daholo. Raha tianareo lehilahy malagasy hiverina aminareo ny fahatokisan'ny vehivavy malagasy, dia raiso ny responsabilités-nareo ary mahaiza manaja olona, mianara manaja olona. Mahari-pery ny vehivavy malagasy ka tsy vola fe vola ihany no antony itadiavany vazaha. Tsy fantatra ho vazaha iza sy manao ahoana no ho vady fa rehefa sanatria tsy maintsy hisaraka ihany, mba efa eo aloha ny vola sy efa manan-koraisina ihany (sécurité), fa raha lehilahy gasy, hianao sady voahosihosy no borona satria ny anao aza no takisenany sokirina ange!
Posted by: Lalasoa at 2008/03/28, 13:07
lol ... sao tena tokoa lancer-na ihany le vohikala fitadiavana olon-tiana ry tokinao a ?
Posted by: pissoa at 2008/03/28, 15:26
pissoa > mampihomehy mits njy 'ty. tapa-tsinay zah tato
Lalasoa > Misaotra anao nanazava! Tsy hasiako ady hevitra satria azoko tsara izao ilay antony 'kay. Fa araka ny voalazanao tetsy ambony (ary soa ihany fa nomarihinao io), tsy mitovy daholo ny lehilahy malagasy.
Izaho manokana dia notaizàna ray tsy nanao na dia ny iray amin'ireo voalazanao ireo, ka izay no mety nandiso ny fomba fijeriko. Noheveriko fa betsaka ny sahala azy mivady ray aman-dreniko (sanatria tsy fisehosehoana ny ilazàna izany akory fa fitanisàna ohatra iray fotsiny).
"Ny hevitra tokoa tsy azo tsy amin'olombelona!"
traduction : "De la discussion jaillit la Lumière"
Posted by: Tokinao at 2008/03/28, 19:40
tokinao: mampatsiaro ahy ilay hiran'ny olombelona iray izay hoe soanaly...
Fa io resaka io dia olana foana ho an'ny firenena andalampandrosoana hoatran'ny madagasikara.
Satria mibahana be ny resaka hoe fahantrana. Manaraka izany, miala tsiny @ity teniko ity, miala tsiny miala fondro, fa nareo lehilahy gasy anie ka betsaka no "tsy manjary" e!
sady vitsy no manaja vehivavy sy mahay manambitamby ny vadiny izany...
Tsy hidirako lalina iny fa dia mila ny toekarena sy ny fomba fisainana mihitsy no miova, ary koa tsy zatra solution de facilité hoe manambady vazaha dia hivaha ny olana, vao maika mifanohitra satria rehefa tonga aty olana hafa indray no atrehina (tsy fitovian'ny kolontsaina, resaka fianakaviana, ny samy maka ho azy eo anivon'ny fiaraha-monina, ny métro-boulot-dodo sns)
Posted by: maintikely at 2008/03/28, 21:27
Ny tany an-dalam-pandrosoana tokoa no tratran'izy io hatrany
maintikely > Misaotra nilaza hevitra. Marina tokoa ny teninao : misy tokony harenina tokoa, na ny toetran'ny lehilahy na ny fisainan'ny vahivavy.
Koa raha dinihiko dia ny fitaizana ny ankizy hatramin'ny mbola kely mihitsy no tena fototra azo iadiana amin'ity olana ity. Ny hazo no vanon-ko lakana mantsy hono, ny tany naniriany no tsara.
Posted by: Tokinao at 2008/03/28, 21:38
Vohitrala lehilahy gasy
Teny marina tokoa ireo voalaza momba ny lehilahy gasy, lol ! Izany no ilaina mifanakalo resaka samy manana ny hitany, ny niainany, ny tiany hatao sns... Ka ahoana ? Hatao izany ny Vohikala hitambarantika rehetra ireto momba ny "lehilahy malagasy mahaiza manaja vehivavy sns ..." ? Misaotra amin'ny valiny ! http://rahelys.unblog.fr
Posted by: Helisoa at 2008/03/28, 23:07
Tafiditra tatsy amin'ny "spam" dia mba afaka napoitrako.
Tena ilaina tokoa ilay miresaka.
Momba ilay vohikala hatsangan'ny vehivavy indray ... tena tsy ratsy ilay hevitra 'ka :-).
Dia izahay indray hanao ny hoe : "ry vehivavy, tandremo ny fomba fisainanao :-)".
Izany no amin'ilay hoe : "mifanohatoha-tsy ho lavo e".
Posted by: tokinao at 2008/03/31, 16:10